Ukutya eyakho i-Dogfood | Martech Zone
Ukutya eyakho i-Dogfood
NgoLwesihlanu, Februwari 6, 2009 NgeCawa, Agasti 23, 2009 Douglas Karr
Uya kulifumana eli gama lisetyenziswa kancinci kwi-Intanethi. Xa ndithetha nge kubloga kwequmrhu, Ndisebenzisa eli gama kuba izikhokelo zenkampani yethu zivela ngokuthe ngqo… kubloga lweshishini.
Oko kwathethi, esi sisithombe esikhuthazayo endisifumene ngeStumbleUpon Ibhlog kaScott Rope. Thetha ngokutya eyakho dogfood!
Loluphi uhlobo lwentengiso onokulufikelela ngokubandakanya imveliso yakho? Ndingathanda ukubona eminye imizekelo yoku!
tags: inkonzo yokuhanjiswa kwedathaLawulo lwe dataUkusilela: Imfihlelo yokuphumelelaInjini yokukhangela imbuyekezo kwintengisoukugqubeka kwiWordPress
Feb 6, 2009 ngo-1: 41 PM
Intengiso ye-B2B ifuna ukubetha ngakumbi, imiboniso engalibalekiyo enje.
Njengopopayi wokubhala, ndiyenzele enye incwadi yam: yayinendoda esentolongweni kwaye ucango lwesisele luvaliwe ngeqhina lebhayisekile laseKryptonite. Umxholo wawusithi 'Isela lebhayisekile'.
Feb 6, 2009 ngo-5: 20 PM
UDoug, nangona oku kwenza ifoto enkulu, inyani, ngokoluvo lwam, yenza oku kuyithengisa okungalunganga.
Ngokwenyani, yayiyi- $ 500 kuphela yemali yokwenyani egcinwe ngaphezulu kwemali engeyiyo, kwaye abantu banokusebenzisa iinyawo zabo ukuzama ukuyaphula. Unogada wayekhona ukuze aqiniseke ukuba akukho mntu wophula imigaqo kwaye abantu abanakufumana ukugcina imali ukuba bayayaphula. -GizModo
Ndicinga ukuba le ntengiso iyakhohlisa kancinci, kuba ukubeka nje amakhulu ambalwa eerandi kunye nokukhuseleka okukhoyo kubonisa ukuba amabango malunga nemveliso agqithisile kubuchule bokwenyani. Musa nina uziva udikiwe kancinci emva kokuba uzifumene ezi nyani?
Ayisiyomzekelo wokwenyani wokutya ukutya kwakho. Eli lixesha loshishino lwesoftware lokwenza uvavanyo kwizicelo ozenzayo ngokuzisebenzisa ukwenza ishishini lakho. It is into oyenzayo kwiCompendium, kodwa ukubeka imfumba phantse yomgunyathi imali kunye nonogada okweeyure ezimbalwa kumboniso woluntu akuqhubisi ishishini lakho kwimveliso yakho. Ukuze i-3M ukuba "itye ukutya kwayo," kuya kufuneka basebenzise iglasi yabo yokhuseleko ukukhusela kakhulu iiasethi zenkampani.
Abantu kufanelekile ukuba baphathwe ngokunyaniseka nangentlonipho, kwaye ngokuzingca ukusebenzisa iimveliso ozenzayo kuyindlela elungileyo yokubabonisa ukuba uyakholelwa kowakho umsebenzi. Ukubeka kunye i-photo-op elawulwayo ukuvelisa i-buzz engeyonyani kubonakala kungaphantsi kokunyaniseka ngokupheleleyo kunye nembeko. Esi sisithintelo, hayi umboniso ozinzileyo wokuthembela kwiimveliso zakho. Ndicinga ukuba i-3M kufuneka isabele kwindlela abantu abayitolike ngayo le foto kwaye baxolise.
Feb 6, 2009 ngo-8: 33 PM
Wow-ungumbonisi ngokwenyani! (gqibezela, ungathuki).
Re: Ukutya i-dogfood yakho-nokuba le nkqubo yisoftware okanye intengiso, ayisiyongxaki. Olu luluvo lwam kwaye ndinamathela kulo.
Re: Isibhengezo-uxabiso lwam bubuchule obubandakanyekayo kwintengiso. Nokuba yinto ye-stunt okanye ayisiyongxaki; yenza ukuba abantu bacinge ngemveliso okanye ngenkonzo.
Ucinga ukuba injongo ibiyinyani- ukuba kukho izigidi zeedola kwindawo evulekileyo apho i-3M ikhusela ngeglasi yayo. Ukucinga kwam kwahlukile - ngokulula kukuba bafuna ukubalisa ibali. Ngokukhawuleza xa ndibona umfanekiso, ndiyaliqonda ibali.
Ngokoluvo lwam, ndiyakholelwa ukuba sisibhengezo esinamandla.
Feb 7, 2009 ngo-12: 38 PM
Ke uthi ufuna ukufumana iinyani emva ukubona ifoto ayinampembelelo kwindlela ojonga ngayo intengiso? Ndiyaxela kwangaphambili ukuba phantse wonke umntu obona lo mfanekiso kwaye emva koko uyafunda nokuba ibiyimvakwemini yasemva kwemini, bekukho unogada, ungakhaba iglasi kuphela, kwaye phantse yonke imali ibingeyonyani-uya kuziva uphoxekile Olu luphawu lwe embi Intengiso: xa ufumanisa ukuba le nto ubuyicinga iyinyani ayisiyiyo.
Licebo elihle i-3M ukubonisa ukomelela kweglasi yabo esidlangalaleni. Kodwa kutheni ungamiseli ityhubhu ekhuselweyo enemfumba yezitena ephumle kwiglasi yeglasi? Okanye wenza umgangatho weglasi? Oku kubalisa ibali elikhulu eliyinyani ngokupheleleyo!
Feb 7, 2009 ngo-8: 51 PM
Andinyanisekanga. Yonke intengiso esiyibonayo kule mihla iyabaxa ukuze 'uxele ibali', nokuba yeyentengiso yemoto okanye intengiso kaGoogle Adwords. Kwakhona, andicingi ukuba injongo ye-3M yayikukuxoka, yayikukuza nentengiso yoyilo.
Kule meko, ndicinga ukuba benze umsebenzi olungileyo. Imfumba yamatye kwiglasi ayinakuba nefuthe (ngokoluvo lwam). Oko kuya kuthetha 'namandla' kodwa hayi 'kukhuseleko' lwezixhobo.
Ngoku, ukuba ifoto yayihamba nevidiyo okanye ibali elalisithi kukho isigidi seedola kwiphaneli kwaye lashiywa kangangeentsuku ezingama-30 kwindawo kawonke-wonke, ngaphandle kokhuseleko… ke ndingavuma nawe. Nangona kunjalo, i-3M ayikhange ihambe nayo nayiphi na kwezo zinto.
Akukho mntu, kwiingqondo zabo ezilungileyo angaya eyokwakha ibhanki entsha ngesisefu esenziwe ngeglasi yokhuseleko eyi-3M emva kokubona oku, andithi? Andicingi.
Feb 7, 2009 ngo-2: 42 AM
Umbono onamandla lowo! Kwaye bendihlala ndilithanda ibinzana elithi 'yitya eyakho ukutya'!
Feb 8, 2009 ngo-9: 59 AM
Uxolo uDoug, kodwa ndiyavumelana noRobby kule. Ukuqala kwam ukubona umfanekiso andikholelwa ukuba inkampani iya kuba nentembelo kwimveliso yabo ukuba baya kuyigcina imali eninzi ngaphakathi kuyo, benobuganga bokuba abantu bazame ukuyiba.
Ndiza kushiya ingxelo kwindawo yakho ndibuza ukuba banazo na iikhamera zevidiyo ezifihliweyo ezibonisa abantu bezama (kwaye kusenokwenzeka ukuba bayasilela) ukophula iglasi.
Kodwa emva kokuba uRobby echithe iimbotyi malunga nokuba nonogada, esebenzisa iinyawo zakho kuphela kwaye enemali engeyiyo, ndaziva ndikhohlisiwe.
Andiqondi ukuba ndicinga nangaphantsi kwe-3M (ndisaya kuthenga amanqaku eposi) kodwa intengiso ngokucacileyo ilahlekelwe lixabiso layo kunye nam kwaye andizukuphuma ndiye kuthenga iglasi yabo yokhuseleko.
Feb 14, 2009 ngo-2: 43 AM
Ukujonga eli phulo lisungulwe ngoFebruwari 2005, ndingathi oku kunika intsingiselo entsha kumsila omde. Ndiyathemba ukuba iqela le-PR / Marcom lisenezilumkiso zikaGoogle ezisetiweyo- olu luhlu lwezithuba luya kubadida.
Isithuba sika-2005: http://www.37signals.com/svn/archives/001064.php
Ukusuka kwimbono yonxibelelwano, le yinto ebonakalayo ebonakalayo enxibelelana nophawu, yomeleza amaxabiso abo kwaye inike umyalezo onamandla. yinto enzima ukuyenza kwindawo yokumisa iibhasi.
Agasti 7, 2009 ngo-4: 51 PM
URobby Slaughter ngokucacileyo akaliqondi ilizwe lentengiso… uthetha ngale nto ngoku akunjalo, Robby? Ewe, ke, kubonakala ngathi yayisisixhobo esihle sokuthengisa. Intengiso imalunga nokwenza umfanekiso ongalibalekiyo kwingqondo yomboleki, kwaye esi senzo ngokucacileyo asizukubonwa. Nokuba ungangaphakathi kwimfuno yakho yokuxoxa ngokuchaneka / ukungachaneki kwayo, nokuba imveliso iyasebenza ngokwendlela oza kwenza ngayo emfanekisweni…. ngoku uyayazi ngokumangalisayo imveliso yayo. Ngoku unomfanekiso ongacimekiyo weglasi yokhuseleko ye-3M entlokweni yakho. Ke? Intengiso enobuchule, ixesha.